के हो नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर ?::Pathivara News
के हो नाक, कान, घाँटीको क्यान्सर ?
काठमाडौंका ७० वर्षीय वृद्धको जिब्रोको तल घाउ भएको थियो । उनको मुखमा क्यान्सर भएको थियो । सुरुवाती अवस्थामा उपचारमा आएकाले उनको उपचार सम्भव भयो ।
यसैगरी एक जना महिलाको नाकमा मासु पलाएको थियो । उक्त मासु पनि सर्जरी गरेर फालियो । यी दुई केस उदाहरण मात्र हुन् ।
नाक, कान, घाँटीको क्यान्सरको चर्चा अन्य क्यान्सरको तुलनामा कम भएको पाइन्छ । यद्यपि यी क्यान्सर रोगीको संख्या पनि कम नभएको काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालकी डा. दिभा श्रेष्ठ बताउँछिन् । सामान्यतया मानिसको शरीरमा कोशिकाको साधारण विभाजन हुन्छ । क्यान्सरमा अनियन्त्रित कोशिकाको वृद्धि हुन्छ । त्यो फ्याक्टरलाई चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन । डा.दिभाका अनुसार शरीरको अन्य क्यान्सरजस्तै हो, यो क्यान्सर पनि । यसमा एउटा मात्र कारण होइन विभिन्न कारण समावेश हुन्छन् ।